Xildhibaano sheegay in laga soo musaafuriyay Kismaayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Xildhibaano sheegay in laga soo musaafuriyay Kismaayo
Xildhibaano sheegay in laga soo musaafuriyay Kismaayo
December 23, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa sheegay in ay baqdin awgeed uga soo carareen magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubaland.
Xildhibaanadan oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in la handaday naftooda isla markaana loogu hanjabay in la dili doono hadii aysan ka bixin waxyaabaha ay dhexda kaga jiraan.
Xildhibaanada sheegay in loo hanjabay waxaa kamid ah Khadiijo Aadan Cabdi oo kamid ah xildhibaanada aadka uga soo hojeeda siyaasada madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
Xildhibaanaddan oo warbaahinta kula hadlaysay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in sadex xildhibaan oo kula sugan Muqdisho laga soo musaafuriyay magaalada Kismaayo kadib markii ay kasoo horjeesteen siyaasadda madaxda Jubaland.
Xildhibaanad Khadiija ayaa sidoo kale sheegtay in loo diiday xildhibaanada Baarlamaanka Jubaland ay ka hadlaan qorshe guracan oo maamulka Jubbaland uu ka damacsanaa in wax ka badal loogu sameeyo dastuurka u yaala maamulka Jubaland.
Waxa ay sheegtay in badankood xildhibaanada Baarlamaanka Jubaland ay u afduuban yihiin madaxda ugu sareysa ee maamulkaasi sida Madaxweynaha oo sheegtay in aysan ku dhiiran karin ka hadalka khaladaadka ay ku kacaan madaxda Jubaland.
Si kastaba ha ahaatee dhowr jeer oo hore ayaa xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Jubaland iyo siyaasiyiin waxa ay sheegeen in laga soo musaafuriyay magaalada Kismaayo kadib markii ay dhaliileen hanaanka madaxda maamulkaasi ay ku hogaamiyaan shacabka deegaanada Jubaland.